ဂရင်းသောကြာနေ့: ဘာလဲ၊ ဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲ | Green Renewables များ
ဂျာမန် Portillo | 24/11/2021 16:28 | ပတ်ဝန်းကျင်
Black Friday သည် လွန်ခဲ့သော နှစ်အနည်းငယ်က စပိန်တွင် စကားမပြောဖြစ်ခဲ့သော အရာဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ယခုအခါတွင် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမျှ သူ့ကို မသိရန် ခက်ခဲလှသည်။ ၎င်းသည် United States တွင်မွေးဖွားလာခဲ့သည့် စားသုံးသူအစဉ်အလာတစ်ခုဖြစ်ပြီး စားသုံးသူများအတွက် ဆွဲဆောင်မှုရှိသောကမ်းလှမ်းမှုများဖြင့် အလွန်ပြင်းထန်သောလျှော့စျေးများဖန်တီးရန်ကြိုးစားသည်။ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကို ရောင်းချရန်ဖြစ်သည်။ နိုဝင်ဘာလတိုင်း ကျင်းပလေ့ရှိသည်။ ခရစ္စမတ်အားလပ်ရက်များမတိုင်မီ တင်းမာမှုမရှိသော စားသုံးမှုလှုပ်ရှားမှုနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ သောကြာစိမ်း. ၎င်းသည် မတူညီသော၊ တာဝန်သိပြီး ရေရှည်တည်တံ့သောစားသုံးမှုကို ထောက်ခံအားပေးသည့် လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်၊ Green Friday နှင့် ၎င်း၏ လက္ခဏာများနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ သည် သင့်အား သိလိုသမျှကို ပြောပြရန် ဤဆောင်းပါးကို ရည်ညွှန်းပါမည်။
1 Green Friday ဆိုတာ ဘာလဲ။
3 ညစ်ညမ်းသောလုပ်ငန်းများနှင့် အစိမ်းရောင် သောကြာနေ့
Green Friday ဆိုတာ ဘာလဲ။
Green Friday သို့မဟုတ် Green Friday ကို ၎င်း၏ပြိုင်ဘက်အဖြစ် နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်နှင့် ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ ပြန်လည်အသုံးပြုရန် ကတိပြုထားသည့် "နှေးကွေးသော" ပါတီများကို မြှင့်တင်ပါမည်။e၊ ဆိုင်ငယ်များ၊ လက်မှုလက်ဆောင်များ သို့မဟုတ် တစ်ပတ်ရစ်ရောင်းချမှု။ အရာအားလုံးက အရမ်းစျေးပေါတာကြောင့် အဲဒီနေ့ကို မစားသုံးမိဖို့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲ သူပြောခဲ့တယ်။ သင်တကယ်မလိုအပ်တဲ့အရာတွေကို အများကြီးဝယ်လေ့ရှိပြီး နောက်ဆုံးမှာ သင်ဝယ်တဲ့ပစ္စည်းတော်တော်များများဟာ ဗီရိုထဲမှာ ဖုန်တွေတက်သွားတတ်ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီများမှ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ကတိကဝတ်ကို ဤလူ့အဖွဲ့အစည်းက ပိုမိုတောင်းဆိုလာကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ သိရှိပါသည်။ ဥပမာ- ကုမ္ပဏီတွေလိုမျိုးပေါ့။ Ikea သည် ထူးခြားသော အစပျိုးမှုတစ်ခုဖြင့် ဤသောကြာနေ့လင့်ခ်တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ အကယ်၍ သင်သည် IKEA Family သို့မဟုတ် IKEA Business Network မှဖြစ်ပြီး သင်သည် 15 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ 28 ရက်နေ့မှ 2021 ရက်အတွင်း ဤကုမ္ပဏီမှ အသုံးပြုပြီးသော ပရိဘောဂများကို ရောင်းချပါက၊ ပုံမှန်ပြန်ဝယ်သည့်စျေးနှုန်း၏ 50% ပိုပေးပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဂြိုလ်တစ်ခုသာရှိ၍ သဘာဝအရင်းအမြစ်များ အကန့်အသတ်ရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ သတိထားရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ်ဖို့နဲ့ ကုန်ကြမ်းတွေကို ညစ်ညမ်းစေပြီး ညစ်ညမ်းစေမယ့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကို လျှော့ချဖို့ လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ တစ်ပတ်ရစ်ပရိဘောဂများကို လွယ်ကူချောမွေ့စွာ လဲလှယ်ပေးခြင်းသည် ရာသီဥတုကို ဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေသော ကာဗွန်ခြေရာကို လျှော့ချနိုင်သည်။ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ပမာဏများပါတယ်။ ထုတ်ကုန်အသစ်များ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်းတို့ကြောင့် လေထုသည် တိုးလာပါသည်။ ဤသည်မှာ စဉ်ဆက်မပြတ် စားသုံးမှုကို မြှင့်တင်ရခြင်း အကြောင်းရင်း ဖြစ်သည်။
ရေရှည်တည်တံ့သောဖက်ရှင်ကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံတွင် ရှေ့ဆောင်ဖြစ်သည့် Ecoalf ကဲ့သို့သော အခြားလုပ်ဆောင်မှုများရှိပါသည်။ ထိုနေ့သည် သင့်အား သိသာထင်ရှားသော အပိုဝင်ငွေတစ်ခု ပေးနိုင်သော်လည်း Black Friday တွင် မပါဝင်ရခြင်း အကြောင်းဖြစ်သည်။ လူသားများ လက်ရှိကြုံတွေ့နေရသော ထုတ်လုပ်မှုနှင့် သုံးစွဲမှုအဆင့်များသည် နောက်ပြန်မဆုတ်နိုင်သော အကျိုးဆက်များရှိသည်။ နှစ်စဉ် အထည်အလိပ်ပေါင်း သန်း ၁၅၀,၀၀၀ ကျော်ကို ထုတ်လုပ်ပြီး ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အမှိုက်ပုံတွင် အကျုံးဝင်သည်။
လူဦးရေတစ်ခုလုံး၏ အလွန်အကျွံနှင့် မလိုအပ်ဘဲ စားသုံးမှုကို အားပေးသည့် Black Friday ကဲ့သို့သော ကမ်ပိန်း။ စျေးနှုန်းချိုသာတဲ့ အထည်အားလုံးကို မြင်တဲ့အခါ အရည်အသွေးက အရမ်းဆိုးတယ်၊ အဲဒါကို ပြန်လည်အသုံးပြုလို့ မရနိုင်တဲ့အဆင့်အထိ နားလည်ရမယ်။ ဤအရာအားလုံးသည် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ လျော့နည်းလာခြင်းနှင့် ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေသည့် ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့များ ထုတ်လုပ်ခြင်းကဲ့သို့သော ကမ္ဘာမြေကြီးအပေါ် ကြီးမားသော သက်ရောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ စားသုံးသည့်နှုန်းထားအတိုင်း ရိုးရှင်းစွာ ဆက်လက်မစားသုံးနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာဂြိုဟ်အတွက် ပိုမိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့် အခြားဆုံးဖြတ်ချက်များကို စတင်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ငါတို့မှာ တစ်ခုတည်းရှိတယ်။. ဝယ်တာနည်းပေမယ့် ပိုကောင်းပါတယ်။ စျေးနှုန်းကြောင့်သာမက အရည်အသွေးကြောင့်ပါ ဝယ်ယူမှုမပြုလုပ်မီ လူဦးရေကို နှစ်ကြိမ်စဉ်းစားရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
ညစ်ညမ်းသောလုပ်ငန်းများနှင့် အစိမ်းရောင် သောကြာနေ့
ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ဟန်ချက်ညီမှုဆီသို့ ရောက်ရှိရန် ဝေးကွာနေသေးသော စက်မှုလုပ်ငန်း မြောက်မြားစွာရှိပါသည်။ ဖက်ရှင်လုပ်ငန်းသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဒုတိယအညစ်ညမ်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကမ္ဘာ့ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုအားလုံး၏ 10% ခန့်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ရေဆိုးများ၏ 20% နီးပါးသည် ဖက်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းမှ လာပါသည်။ အထည်အလိပ်များထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုများအတွက် ရေအလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုအပြင် ၎င်းတို့၏ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းမှာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနည်းပါးကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
အထည်အလိပ်များအတွက် ပြန်လည်အသုံးပြုနှုန်းသည် အလွန်နည်းပါးပါသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အဝတ်အထည်များ ထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းအားလုံး၏ 1% အောက်ကို ပြန်လည်အသုံးပြုပြီး အထည်အသစ်ပြုလုပ်ရန် အသုံးပြုပါသည်။ အဓိကကတော့ အထည်အလိပ်အမှိုက်တွေကို ကျန်တဲ့အရာတွေနဲ့ မခွဲထုတ်နိုင်လို့ပါပဲ။ ထို့ကြောင့် စားသုံးသူများမှ စွန့်ပစ်ထားသော အထည်အလိပ်ထုတ်ကုန်များ၏ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည် အမှိုက်ပုံများ သို့မဟုတ် မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းများတွင် ကုန်ဆုံးကြပြီး ပို၍ပင် ညစ်ညမ်းမှုကို ဖြစ်စေသည်။
ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါဖြစ်နေသော်လည်း Black Friday အလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုကို ရပ်တန့်၍မရပါ။ 2020 ခုနှစ်တွင် အမေရိကန် စားသုံးသူများ သူတို့ဟာ အွန်လိုင်းမှာ ဒေါ်လာ ၉ ဘီလီယံ သုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းသည် ယခင်နှစ်ထက် ၂၁.၆ ရာခိုင်နှုန်း ပိုများသည်။
Green Friday စားသုံးခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အိတ်ကပ်အတွက်ဖြစ်စေ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ဖြစ်စေ ကျန်းမာရေးနှင့် မညီညွတ်ကြောင်း စားသုံးရန်အတွက် စားသုံးခြင်းသည် ကျန်းမာရေးနှင့် မညီညွတ်ကြောင်း ပြည်သူများ သတိပြုမိနိုင်စေရန် မျှော်လင့်ပါသည်။ ဤအချက်အလက်ဖြင့် သင်သည် Green Friday နှင့် ၎င်း၏ ရည်ရွယ်ချက် မည်သည်တို့ကို ပိုမိုလေ့လာနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ » ပတ်ဝန်းကျင် » သောကြာစိမ်း